MAUI: chirongwa ichi chinonakidza chii? Kutendeuka kunodzoka! | Linux Vakapindwa muropa
MAUI ishoko nyowani izvo zvinogona kunge zvisinganzwike kunge zvakajairika kwauri (kana pamwe kana iwe uchiziva iyo Nitrux chirongwa), asi icho chinofanira. Icho chirongwa chinonakidza chinonunura "kukanganikwa" kusangana uko Canonical yakarumbidzwa zvakanyanya uye kuti pakupedzisira haina kuuya. Asi, pamusoro peizvozvo, MAUI inoenda nhanho inopfuura isinganyore kusangana, zvirinani sezvayainzwisiswa kusvika zvino.
Este MAUI Chirongwa chinangwa cheku fambisa kugadzirwa kwekushandurwa kwekushandisa zvinoenderana ne KDE tekinoroji, ndokuti, ne Qt maraibhurari. Iva chikamu che Nitrox kana NXOS, inozivikanwa Ubuntu-based distro iyo inoshandisa iyo NX Desktop nharaunda, zvakare yakavakirwa paPlasma 5.
Ivo vanga vachigadzira maapplication ane chinokwezva chinoonekwa chinowoneka kwenguva yakati (senge chinoonekwa cheGSI chaunowana muPlasma) uye izvo zvinoshanduka. Nenzira iyi, inoitirwa kuvhara nhamba hombe yezvigadzirwa uye mapuratifomu, zvese nhare mbozha nemaPC. Uye izvo hazvisi chete zvinosanganisira Android uye GNU / Linux sezvaungafunge, zvakare Microsoft Windows, iOS uye macOS.
Izvo zvingave zvakanaka, kupa sync pamidziyo yese, zvisinei nerudzi, kuti mushandisi avashandise kwavanoda. Parizvino, iri muchikamu chekutanga chekuvandudza, asi unogona kutomboedza kumwe kufambira mberi kwayo. Uye chokwadi, kunyangwe vaine nzira refu yekufamba, ivo vari kutovimbisa.
Ndichiri nazvo zvimwe zvikanganiso kupolishaSemuenzaniso, haasi ese masisitimu anoshanda anopa rusununguko rwakafanana. Nyaya yeIOS inogumira iyo faira system zvishoma, izvo zvinoita kuti zvisashande chaizvo. Neshanduro imwe neimwe nyowani uye kuburitswa, vanogadzira vanowedzera zvigadziriso zvinobatsira kubata nematambudziko aya uye voita kuti vashandiswe uye kuve nani.
Iwe unogona here kufungidzira izvo izvo 100% inoshanda chirongwa seichi chingareve? Izvi zvinoreva kuti kukanganisa kukuru izvo zvinogona kuchinja zvinhu zvakawanda mune yazvino software nzvimbo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » MAUI: chirongwa ichi chinonakidza chii?
Java inotendeuka makumi maviri neshanu. Nhoroondo ipfupi yepuratifomu